Afganistana:Fandriampahalemana … · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2008 18:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, English
Na dia voizina mafy indray aza amin’izao fotoana ny momba an’i Afganistana amin’ny fampahalalam-baovao any Etazonia, dia isan’izay raharaha goavana saro-bahàna ho an’ny firenena izy ity. Na tsy hiresaka izay hitan’i Azar Balkhi ho fahalemen’ny ‘Vondrona miara-dia’ mba hifehy ny fifanenjehana ara-poko ka niantsoany fanafihana an’habakabaka aza.
Resaka tsy azo idifiana anefa izany. Nyzera baomba tao Shindand dia iray ihany amin’ireo olana atrehin’ny faritra andrefan’i Afganistana izay matetika no atao an-jorom-bala ihany. Tsaraina amin’ny ankapobeny ho milamina kokoa, azo antoka kokoa, sy mivoatra kokoa noho ireo faritra sisa ato amin’ny firenena (izany no izy), miatrika fanamby goavana ihany koa i Herat, manomboka amin’ireo ambara ho “Tajik Taliban.” Hoy i Tim Foxely manazava,
Ny fiheverana hoe ankehitriny dia misy vondrona foko manomboka maka tàhaka, raha tsy efa nanara-dia mihitsy ny Taliban aza , sy mitarika fanoherana ny fitondràna ao Kabola, dia efa maka toerana any anelanelan’ny “tena antony marina ipoiran’ny ahiahy” sy ny “nofy ratsin’ny valalabemandry (isam-batan’olona)”. Avoitrany amin’izany ny fisian’ny “faritra fitanilàn” ireo mpitari-tafika mpibaiko ao amin’ny ISAF, fahiny sy ankehitriny, izay efa mankaleo ny mponina ny fiafaràny amin’ireo miaramila iraisam-pirenena an’arivony mirodorodo eraky ny vazantany sy manjera baomba ao ambonin’ny lohany, sy amin’ny governemanta iray mpandray kolikoly tsy mahavita izay andràsana aminy sy manara-poana any ananonanona any. Fomba fijery hafa ny fifikirana amin’ny faminavinàna fa i Akbari dia nalàna tamin’ny toerany noho ny kolikoly na ny tsy fahaiza-manaony, na izy roa mitambatra ary dia tsy manan-javatra hafa intsony hatao afa-tsy ny be dongy, toy ny fanaon’ireo mpitari-tafika Afgana. Amin’ny toy izany, dia tranga maningana sy voafaritra ka tsy dia misy tokony hamakiana ati-doha loatra.
Ity no mamintina tsara hoe hatraiza no tena maha-sarotra ny famaritana hoe ny inona amin’ireo olana ao Afganistana no tena ilaina araha-maso akaiky sy mitondra mankamin’ny fisavoritahana, ary ny inona, noho ny tsy fahitàna izay tena mahalaza azy mazava, no atao hoe fiovaovàna mihodinkodina eo amin’ny sarin’ny fifanolànana efa mahazatra .
Ny tsena ao Kandahar nandritry ny Ramadany, sary nindramina tamin’i Flickr Chooyutshing.
Endrika maro no mety hisehoan’izany. Alex Strick van Linschoten, ohatra, tsy ela akory izao no niverina ao Kandahar rehefa avy tany ivelany nandritry ny herinandro vitsivitsy. Inona no tsikariny tamin’ny fiverenany ?
Angamba raha misy zavatra nentin’ny roa herinandro nivahiniànana tany ivelany (Kalifornia sy Laondra), dia ny nanomezany fahafahana maminavina ireo zavatra izay mora ekenao avy hatrany ho ‘voajanahary’ raha monina ao Kandahar. Raha misy olona mandrangarànga ny basy poletany ary mametraka izany eo ambonin’ny latabatra ao amin’ny Café Nero ao Laondra, dia heveriko ho manana olana iray na roa ry zareo, nefa ao Kandahar, tsy hisaina indroa akory aho raha ireo olona anaovana fanadihadiana na ireo namana no miditra avy any an-dalambe any ka mametraka ny AK-47n-dry zareo na ny RGP-ny (fandefasana bala afo-manga) hiankina eo amin’ny rindrina.
Ankoatra izay dia milamina ihany ny tanàna.
Izany eo ihany. Somary any avaratra any, i Harry Rud dia mamakivaky ireo arabe voaràvaka fako erak’i Kabola, ary mahamarika hoe hatraiza no fahatsapàn’ireo vahiny ho toy ny tafasaraka amin’ny tontolo rehefa mihidy ao anatin’ireny tanàna be voaàro misy azy ireny ry zareo :
Be ny vahiny aty no tsy mahazo mamoaka ny tongony ivelan’ny faritra misy azy ireo, mànana lisitry ny toerana azony aleha sy, (amin’ny ankapobeny) tsy azony aleha, sy fepetra hentitra momba ny haàvon’ny rindrina, ny hatevenan’ny fefy tariby, ny isan’ny mpiambina mitam-piadiana manodidina azy ry zareo. Tsy dia zavatra irian’ny maro sy ankasitrahany loatra izany. Mitondra ny betsaka ho any amin’ny tsy fifantohana aza. Manam-bintana ihany aho mba afaka mandeha lavidavitra, na dia tsy ahitàko maminy loatra aza eo amin’ilay toerana rehefa misavorovoro iny aho nony hijanona ka mitoditodika mijery ny manodidina ahy.
Sarotra be ny hamaritra ny anton’izay fisavorovoroana izay. Eo ny hoe mety ho amin’ny toerana sy fotoana iray maha-idiran’andro ny tena. Ary izay no mahatonga ilay fiheverana ho tafasaraka amin’ny tontolo: ny hevitry ny hoe isika sy zareo fonosin’izay, ny fiheverana ny tena ho tsy amin’ny toerana sahàza sy arahan’olo-maro tsy fantatra maso. Toy ny vorona taitai-dava, mandefa lavitra ny fijery.
Nefa mahatonga fanontaniana toy izao izany : fa tena inona marina moa no ataon’ny Tandrefana aty Afganistana fito taona aty aorian’ny fanjakazakàna? Manamarika i Azar Balkhi fa toa misy fisavoritahana tsy voahevitra ao Andrefana ao, fa tsy dia ahitàna tàratra loatra ny dikan’ny hoe hamehana :
Ireo mpitolona talibana pakistane dia nikapoka teo imasom-bahoaka mpivaro-kena roa tratra nivarotra henam-biby tany amin’ny sàha andrefan’i Swat androany 25 Septambra, ary ny androtr’io ihany dia notifirin’ny tafika Pakistane ihany koa ireo helikoptera mpanara-maso an’ny Amerikana nanàra-dia ireo tafika an-tanety US nandeha tamin’iny sisin-tany tsy dia milamina loatra iny tamin’ny Alakamisy teo, nahatonga fifandonana an-tanety naharitra dimy minitra teo amin’ny firenena roa tonta.
Nitranga izany rehetra izany nandritra indrindra ny fotoana nanomezan’ny Filoha Asif Ali Zardari sy Hamid Karzal toky an’i Washignton fa hitondra fanampiana amin’ny ady atao amin’ny fampihorohoroana izy ireo sady nihaona tamin’ireo lohandohan’ny mpisorona tao New York …
Nentin’ireo mpitolona talibana nirongo fiadiana mavesatra ireo mpivaro-kena voatampina maso ho any amina tsena iray be olona tao amin’ny soba-ditrikan’i Kabal ary dia nokapohin’izy ireo teo imason’ireo olona efa ho 200 teo ho eo. Nampandrenesin-dry zareo talibana koa ny fampahalalàm-baovao mba handrakotra ity tranga ity, fa tsy nisy na dia iray aza avy amin’ny governemanta mba hanàkana azy ireo.
Izay mitondra antsika hiverina any amin’ny teboka fiaingàna : dia ny maha raharaha saro-bahàna an’i Afganistana. Adihevitra farany nihodinkodina tany amin’ny sampandraharaha politika tao Laondra, Washington, sy Brioksela, ny fifampiraharahana amin’ireo talibana. Manontany tena i Christian Bleuer :
•	“Talibana ” inona (Quetta Shura? Ireo mpitarika eo an-toerana azo lazaina ho mahaleo tena amin’ny ampahany ihany? Ny Hizb ? ry zareo Haqqanis ? sy ny maro hafa? Sa izy rehetra miaraka ?)
•	Ary raha toa ny valinteny ka hoe “ireo Talibana Malemy fihetsika” , isaorana sahady ny fanomezana famaritana hoe iza marina moa izy ireo.
•	Tsy saininareo ho toy ny efa endrika fifampiraharahàna ve ny vinavinam-pampihavànana ketrehin’ny governemanta Afgana?
•	Tena tsy mahalàla marina ny fifampiresahana/fifampiraharahan’ny governemanta Afgana amin’ireo mpioko ve ianareo ?
Rehefa voambàra izany rehetra izany, mbola misy ihany kosa fiainana mamiratra eto Afganistana. Mizara ny fotoana iray toy izany i Andrea, ary tsy azo tsaraina velively amin’ny alàlan’izay fitantaràna fohy. Miteny ho azy izany zavatra izany.